Asan-jiolahy : sarona ireo telolahy nisandoka ho polisy | NewsMada
Asan-jiolahy : sarona ireo telolahy nisandoka ho polisy
Tsy nijanona ireto roa lahy raha tsy nanao tifi-danitra ny polisy, tany Antanetibe Ambohidrapeto, ny alin’ny alakamisy, 2 jona 2016, tokony ho tamin’ny 10 ora.
Norasim-potsiny avy eo izy roa lahy, ary nahitana fitaovana maromaro fampiasan’ny polisy. Vodim-baly misy vodina lakile, « Baton éléctrique », rongony iray fonosana, “contravention” ana polisy maromaro sy « insigne polisy » ary «carte professionnelle». Tamin’ny fanadihadiana azy ireo, niaiky izy ireo fa azy ireo fitaovana ireo ho entina manao ny asa ratsiny sy hampitahorana ireo olona lasibatra. Nilaza ihany koa izy ireo fa misandoka ho polisy Raliva, ary efa nigadra teny Antanimora tamin’ny taona 2005.
Nanoro ny namany iray izy ireo, antsoina hoe Raymond, 41 taona izay nosamborina tany an-tranony ny zoma vao maraina. Tamin’ny fanadihadiana azy, nilaza izy ireo fa mifoka rongony alohan’ny anaovany ny asa ratsiny.
Araka ny fanazavana, naharay antso ny polisy avy ao amin’ny kaomisaria Itaosy fa misy olona voaendaka eny amin’ny faritra Antanetibe Ambohidrapeto. Nidina teny an-toerana avy hatrany ny polisy ka nahita lehilahy roa nandeha an-tongotra. Rehefa nahatazana ny polisy ireo jiolahy ka nitsoaka avy hatrany ary raikitra ny fisamborana. Nirefodrefotra ny basy vao nijanona ireto farany. Voasambotra tamin’izany i Olivier na Raliva, 36 taona sy Jerilalao na Rajery, 38 taona. Natolotra ny fitsarana ny asabotsy izy telo lahy.